Fanavaozana ny serivisy - Filankevitry ny morontsiraka afovoany
Famandrihana Kerbside betsaka
FILAZANA MANDRAKIZAY - 2 Mey 2022:
FILAZANA MANDRAKIZAY SERVIS SERVICES VOALOHANY:
Nesorina ny fiatoana vonjimaika amin'ny famandrihana fanangonana famoriam-bola be dia be ary afaka mamandrika serivisy amoron-dalana ny mponina ao Central Coast.
Mbola misy fiantraikany amin'ny fihanaky ny tsimokaretina Covid-19 amin'izao fotoana izao ny mpiasantsika, na izany aza, ny fitsipika fitokanana vaovao dia nampihena ny fiantraikany ary afaka manohy ny serivisy amin'ny fotoana iray isika. voafetra ny fahafaha-manao.
Noho ny tsy fahampian'ny loharanon-karena dia mety tsy ho hita mandritra ny herinandro vitsivitsy ny fahafahan'ny serivisy feno ary noho izany dia mety ho hitan'ny mponina fa atolotra azy ireo ny daty famandrihana ao anatin'ny herinandro vitsivitsy.
Raha mamandrika serivisy sisin-dalana ianao dia ataovy azo antoka fa manamarina ny datin'ny famandrihanao ianao ary apetraho eo amin'ny sisin-dalana ny fako betsaka anao ny andro alohan'ny daty famandrihanao.
Te hisaotra ny Central Coast Community izahay noho ny faharetany.
Ny fanavaozam-baovao isan'andro dia azo jerena ao amin'ny pejy Facebook: www.facebook.com/1coast
• Ny olona tsirairay dia tokony hametraka ny fako manokana rehetra toy ny Rapid Antigène Tests (RATs), tavy, fonon-tanana, lamba famaohana, famafana ary saron-tava ao anaty harona plastika na koveta;
F: Nahoana ianao no manao servieta sy serivisy amin'ny sisin-dalana alohan'ny mahazatra?
A: Mba hitazomana ny fomba fanalavirana ara-tsosialy azo antoka eo amin'ny mpiasanay dia manakorontana ny fotoana fiaingan'ny mpamily izahay mba hampihenana ny loza ateraky ny COVID-19 amin'ny mpiasanay. Midika izany fa hanomboka amin'ny 3.30 ora sy sasany maraina manerana ny morontsiraka afovoany ny serivisy sasany. Izany dia miantoka fa tsy manana mpamily mihoatra ny 4 izahay ao amin'ny toeram-piasana amin'ny fotoana iray mba hampihenana ny mety hifindran'ny COVID-19 eo anelanelan'izy ireo ary hiantohana fa afaka manohy manary daba manerana ny faritra izahay.
Aza adino ny mametraka ny dabao toy ny mahazatra amin'ny andro fety. Ny serivisy fako sy fanodinana dia tsy miova manerana ny morontsiraka afovoany amin'ny andro fety rehetra ao anatin'izany:
Zoma tsara & Alatsinain'ny Paska
Jona Long Weekend
faran'ny herinandro lava oktobra
Andro Krismasy & Boxing
Ampahatsiahivina ny isan-tokantrano hametraka fako amin’ny ankapobeny, fanodinana ary fako avy amin’ny zaridaina famoriana ny alina alohan'ny andro voatondrony
Araho ny '1Coast' ao amin'ny Facebook raha te hanara-maso ny fako sy ny fanodinana ao amin'ny Central Coast.